တင်ပြချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတက လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်း မှာကြားပြီး နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများမှာ မလွဲမသွေ လုပ်ဆောင်ရမည့် ကိစ္စရပ်များဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီအလိုက် လုပ်ဆောင်ဖွယ်ရာ ရှိသည်များကို အချိန်မဆိုင်းဘဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန် စုစုစည်း စည်း ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားကြရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ စားရေးနှင့် နေရေးကဏ္ဍများ ဆောင်ရွက်ပေး သည့်နည်းတူ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စသည့် လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း ဆက်လက် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားကြရန် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် မှာကြားပြီး အစည်းအဝေးကို မွန်းလွဲ (၁) နာရီ (၁၅) မိနစ်တွင် ရပ်နားလိုက်သည်။
This entry was posted on April 10, 2013, in အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အနာဂတ်အတွက် ရဲရဲတောက် အစ္စလာမ်ဇာနည်များ
ရခိုင်ပြည်နယ်ဒုက္ခသည်များအတွက်လူနေအိမ်များကို သုံးလအတွင်း အပြီးဆောက်ရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ပြောကြား →